Masar oo uga digtay Ethiopia in biyo xireenka webiga Nile. Ay ku dhaganaato | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Masar oo uga digtay Ethiopia in biyo xireenka webiga Nile. Ay ku...
Masar oo uga digtay Ethiopia in biyo xireenka webiga Nile. Ay ku dhaganaato
Previous articleQarax Khasaaro Geystay Oo Lala Eegtay Ciidamo Ka tirsan Kenya Gobolka Lamuu ee dalkaas
Next articleQoor Qoor muda ka dib maanta gaaray Dhuusamareeb
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay kulan casho ah la yeeshay Ganacsatada Puntland. Sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Siciid Deni...
ku dhawaad 15 qof oo ku geeriyooday dagaal beeleed...
Donald Trump oo ku socoto baaritaano ku aadan in uu...
Xafiiska tirakoobka UK oo Xog uu sameeyay ku sheegay in...
Madaxweyne Dani Farmaajo waxii igu dhahay Hawiye Ciidan baan u heystaa...